Somali – Telly's Photos
Qiimaha galitaanka kombiyuutar kasta waa $ 15: USD sawir kasta
sawirrada ayaa la gelin karaa.
Qiimaha taleefannada gacanta waa $ 2: USD oo sawir leh
Iyada oo xadidaad aan xadidnayn ee dhammaan qaybaha iyo qalabka.
Dhamaan lacagaha lacagta lagu bixiyo waxaa lagu bixin doonaa habka bixinta caalamiga ah ee ugu habboon. Xusuusnow, ma aha wax ku saabsan kamarad, ma aha ku saabsan sawirqaade, ma ahan mawduuca, waxaa ku saabsan daqiiqad, qabasho! Fikrado! Soo Gudbi!
Gelinta waa inay ku jiraan.
Magaca, cinwaanka iimeylka, cinwaanka tartanka (yada) ee aad soo gashay, isticmaal luqaddaada hooyo haddii aad doorbidayso oo na siinayso aragti ku saabsan daqiiqada fanka.
Dhammaan tartamada oo dhan waxay u furan yihiin luqadaha oo dhan da ‘walba oo dhan muwaadiniinta oo dhan riyooyin iyo rumaystayaasha oo dhan. Maadaama ay noloshu ku hareeraysan tahay agagaarkeena, waa ay xakameysaa oo ay soo bandhigtaa! Waxaan nahay dad udambeeyay magaalo magaalo iyo xayeysiisyada miyir la’aanta ah, koobabkayagu waa xusuusta digitalka ah ee farshaxanka ah ama sheyga asaasiga ah.
Dhinaca tartankaan waxaad leedahay 3 siyaabood oo aad ku dhejin kartid garsoorayaasha.
Arag, nagu caawi inaan aragno.
1) Waxaan rabnaa inaan aragno ehelnimada, quruxda dabiiciga ah, tamarta aan la ictiraafin, dhiigga nolosha, wax yaabaha macquulka ah, dambi aan daahir ahayn ama xaqiiqda adag ee dunidan, oo ka imanaysa farshaxanka aad noo soo bandhigeyso.
Dareemo, nagu samee dareemo.
2) Waxaan rabnaa inaan dareemno in wadniyadayadu ay u garaacaan sida roobka daaqada jiilaalka iyo sida sawir qaadayaasha iyo farshaxanka, waxaan dooneynaa inaan noqonno kuwo aad u kacsan, sida aad u sharaxday xilligii aad doonaysay inaad xakameyso weligeed, hal ilbiriqsi. Noo sheeg sababta sawirkan u noqon doono qayb ka mid ah farshaxan farshaxan oo dhiirrigeliya dadka kale, iyo sida ay muujinayso dhammaan waxyaaba weyn ee ah in ay “marnaba aadanaha baranin abid abid abdiya”.
Dhegayso, nala hadal.
3) Waxaan rabnaa in aan maqalno neefta udhaxeysa dabaylaha dabaysha ee dillaacay, ama qosol iyo murugo markaad si toos ah ugu qorto dareenadeena, iyo dabciga dabka. Na soo codso in isdhexgalka daqiiqad, kamarad, iyo jawi. Fursaddan weyn ee dunida lagu soo bandhigayo xirfadahaaga sawiradaada, xitaa haddii sawirku uu muujiyo waxa aad ku aragtay indhahaaga mega 600 mega. Waxaan u baahannahay ereyadaada si aan u abuuro daaqad noo suura galin karta, inaad u fekerto sidii aad yeelatay. Si aad u aragto sidaad u sameysay, si aad u taabatid sidaad u samaysay oo aad u dhegaysatay sidaad u samaysay.
Garsoorayaasha ayaa sugaya inay la yaabaan, garsoorayaasheena waa dad. Sidaa daraadeed waxaan kuu rajeyneynaa maalin aad u weyn oo ku yaala barafka, waxaan si dhab ah u sharfeyn doonnaa in aan helno soo gudbintaada.
Hadafkeenu waa inaan bixinno tartamo fara badan oo aan xaddidnayn xuduudaha ku saabsan tayada qalabkaaga, ama aad u qadariso asalka Bokeh.
Waxaan jecelnahay inaan diirada saarno wadnaha-kululaynta, kor u qaadista, dhiirrigelinta, sawirada dabiiciga ah, sawirada naga dhigaya in aan joojino oo aan aragno, sida ay u kicineyso inay noqoto qayb ka mid ah tayadaas, jimicsi jidhka iyo dhiigga.
Waxaan dooneynaa inaan aragno sawirro nagu dhiiri geliya inaan sidoo kale soo qaadno kamaradeena dibedda oo aan qaadno khatarta shakhsiyadeed ee yaryar oo marka dambe dhiirrigeliso dadka kale. Sawirada naga dhigaya inaan rabno inaan la xiriirno sawir qaadaha oo waxaan dhahnaa “si fiican loo qabtay” sawirkaagu wuxuu leeyahay cod awood leh.
Waxaan dooneynaa inaan ku dhejino buugaag qurux badan oo aan kuu soo celinno si nabada farshaxankaaga marwalba ugu fadhido miiska kafeega.
Sidaa daraadeed qayb ka mid ah wax ku dhiirigeliya inaad naftaada riixdo, markii aad noqotid “Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo” noqoshada “waxaan ahay”
Haddii aad ku soo gudubto boggan oo aadan ku jirin afkaaga hooyo, oo aad xiiseyneyso turjumaadda fadlan nagala soo xiriir, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaala hadlo qaababka adiga, ujeedkeenu waa inan leenahay tartankan sawir ee luuqad kasta oo suurtagal ah, wuxuu aaminsan yahay in isgaadhsiinta caalamiga ah la adeegsanayo fanka waa kheyraad aan ka yareyn.
Waxaan u baahanahay taageerada beesha caalamka si aan u badalno.
Tartanka aan xudduud lahayn.